ऋणपत्र निष्काशन गर्दै लुम्बिनी विकास बैंक - Aarthik Sanjal
ऋणपत्र निष्काशन गर्दै लुम्बिनी विकास बैंक
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडल ऋणपत्र निष्काशनका लागि ऋणपत्र विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरको १० लाख कित्ताले हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११ प्रतिशत एलबिबिएल डिबेञ्चर २०८९ ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहेको र ब्याजदर ११ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ ।
उक्त सम्झौतामा लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्तावित ऋणपत्र नियमनकारी निकायहरुकोे स्विकृति पश्चात निश्कासन गरीनेछ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले देशका ७ वटै प्रदेशमा ८३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । यस लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले “निरन्तर सहयात्रा ” भन्ने नाराका साथ उच्चस्तरीय, आधुनिक एवं नविनतम प्रविधिहरु सहितको सुरक्षित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
२८ वैशाख २०७९, बुधवार १४:२२ बजे प्रकाशित
नबिल बैंकद्वारा पेमेन्ट नेपाल (गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा. लि.) संग साझेदारी
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सम्पन्न